Warshadda Bolt - Shirkadaha Soo Saara Bolt, Shirkadaha
Xadhig xoog badan
guntin bir ah
Diirinta kulul ee ka hortagga diirran ee ...
Hexagona kulul oo si kulul loo dhex geliyay ...
Waxaan haynaa tiro badan oo din931 hex bolt. Xirmooyin madax-hex-jeexan ah oo leh qaybo kala jaad ah isla markaana isku-dhejinaya dhererka oo dhan sida ku xusan DIN 931 iyo DIN 933 ayaa loo yaqaan zinc galvanized for protection corrosion.
DIN6921 Flange Bolt wuxuu leeyahay howsha joojinta wareegga, kaas oo loo heli karo dusha sare ee isku xirka qaybta u baahan dusha sare ama siman. Intaa waxaa dheer, our DIN6921 Flange Bolt wuxuu kufiican yahay aasaaska la taaban karo ee la asaasay, waxaana loo isticmaalaa hagaajinta aasaaska mashiinnada iyo qalabka. Iyada oo ay ugu wacan tahay cabbirka saxda ah iyo nashqadeynta iswada, waxaa lagu meelayn karaa meel walba si ay gacan uga geysato sii deynta booska meelaha xadidan. Muuqaalka jilicsanaanta ayaa u muuqda mid qurux badan oo qurux badan.
Kuleyl kulul oo kaarbo kulul leh
Magaca Badeecada Dip Galvanizing hex bolt Size M2-M160 Waxyaabaha Kaarboonku Ka Samaysan Yahay, Birta Aan Jirin, Sida Looga Baahan Yahay. Fasalka Fasalka: 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Dhulgariir Dhismeedka Dhismaha Ect oogada ah, Wareegsan, (ROHS) Zn-plated, Ni-steel, Sida shuruudahaaga ah. Standard DIN GB ISO JIS BS ANSI Shahaadada ISO9001, SGS, OEM-yada OEM-ka waa la heli karaa haddii aad bixiso sawir ama muunad. Xirmada Xirmooyinka dhoofinta caadiga ah ama sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha ...
Xaraashka kulul ee Bolt-ka loo yaqaan
Magaca shirkad sameeyaha Fastener xirmooyin xatooyo khafiifa iyo xawaare ah Mark Marka loo eego baahida macaamiisha. Qalabka birta birta ah, Birta kaarboonku ka buuxaan, zinc steel, Tayada madow ee tayada sare leh ee tayada sare ee Anticorrosive Performance Salt Reach Reach 1000-2000 Saacadaha Codsiga Bisadaha, Warshadaha kiimikada, Deegaanka, Caddaynta Dhismaha ISO9001 2008 Xirmooyinka kartoomada & Baakadaha ama sida waafaqsan baahida macmiilka. Waqtiga gaarsiinta Caadi ahaan sanadkii 15 ...
Waxaan haynaa tiro badan oo din931 hex bolt. Xirmooyin madax-hex-jeexan ah oo leh qaybo kala jaad ah isla markaana isku-dhejinaya dhererka oo dhan sida ku xusan DIN 931 iyo DIN 933 ayaa loo yaqaan zinc galvanized for protection corrosion. sumadda: JiuHe M16 cabbirka din931 hex bolt, M20 dhexroor din931 bolt, M24 din931 heerka hex bolt, m30 din 931 hex bolt, oo dhammaantood kujira. Si balaadhan looga isticmaalo aag kasta oo warshadaha guud ah.
U-bolt waa bir ah qaabka qaabka xarafka U leh silsilado fiiqan leh labada daraf. Kaarboonka Kaarboononka Kaarboonkuudku wuxuu si cad macnaheedu yahay walxaha U bolt U waa bir bir-kar ah.
Kaarboonka kaarboononka ah ee loo yaqaan 'Car bol steel U bolt' ayaa markii hore loo adeegsaday in lagu taageero tuubbooyinka, tuubooyinka ay dheecaannada iyo gaasku marayaan. Sidaas oo kale, bir-karooyinka birta kaarboonka ah waxaa lagu cabiray iyadoo la adeegsanayo hadalka injineerinka shaqada. Kaarboonka kaarboon-ka-ah ee loo yaqaan 'carbon-Ut bolt' waxaa lagu sharxi doonaa cabirka dhuumaha uu taageerayo. Kaarboonka kaarboon-ka-loo yaqaan "al-bolt" ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu xidho xadhkaha.
CINWAANKAAagga Wershadaha ee Dongmingyang, Degmada Yongnian, Handan City, Gobolka Hebei
WAQTIGII SHAQADA08:30 ~ 17:30 Moday ilaa Sabtida